Ezigbo Ihe ritga nke Ọma maka Mmejuputa Ngwọta Ndị Ọrụ Lone (A10004) | Singapore Top Mini GPS Personal Tracker maka Autism / Autistic Kids & Dementia okenye
Ezigbo Ihe ritga nke Ọma maka Mmejuputa Ngwọta Ndị Ọrụ Lone (A10004)
Azịza nke ndị ọrụ na-enweghị ebe obibi bụ ụzọ ndị e si eme ihe banyere ihe ize ndụ ndị ọrụ owu na-eche ihu mgbe ha na-arụ ọrụ ha. A maara nke ọma na ndị ọrụ naanị ya na-enwekarị mmerụ ahụ na ịnwe ihe ọghọm ndụ, mana ọ dịkwa mkpa na a na-eme nyocha nke ọma n'ihe egwu dị na ya iji mee ka onye were ya n'ọrụ mara ihe nwere ike ime. Site n’inwe ihe omuma banyere ihe puru ime, o gha ike imeputa ihe isi ihe ndia. Nke a bụ ihe naanị otu onye ọrụ ga - esi dị otu a. Ọ bụ omume ileba anya nchekwa nke ndị ọrụ nọ na nnukwu ihe egwu, nke a bụ n'ihi ọnọdụ ọrụ ọnọdụ ha na eziokwu ahụ bụ na ha na-arụ ọrụ naanị ịnọ ndị ọzọ. N'ọnọdụ mberede, ọnweghị onye ga-akpọku ya ọ nweghịkwa onye ọ bụla enyemaka maka enyemaka. Enwere ọtụtụ ụzọ nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ naanị nke ụlọ ọrụ na nzukọ na-arụ ọrụ n'ụwa niile. Offọdụ n'ime ụzọ ndị a bụ:
Ngwa ọrụ nyocha: site na enyemaka nke ngwaọrụ nlekota raara onwe ya nye nke ejiri maka nyochaa ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị ka: gas dị ize ndụ, ọrụ seismic ma ọ bụ ọbụna acidity nke mpaghara. Teknụzụ dabere na smartphone na-enwe ike ịza ajụjụ maka ihe ndị a niile na - akwalite nchekwa nke ndị mmadụ ga - arụ ọrụ na saịtị dị otú ahụ. Achọghị ngwaọrụ dị ka ha nwere ike igbochi ọrụ; a na-ebukarị ha ma ọ bụ rapara na nanị ndị na-ahụ maka nchekwa dị ka akụkụ nke uwe ha, enwere ike itinye ha na baajị ID ma ọ bụ otu ihe dị mkpa.
Iji ngwaọrụ ndị a, ịnwere ike ibu amụma ihe egwu na-abịanụ
Ha nwere ike okpukpu abụọ ka ndị ahịa wee chọta onye ọrụ
Ọ bụrụ na ewepụ ya, ọ gaghị enwe ike ịrụ ọrụ ya
N'ọtụtụ oge, usoro a enweghị nleba anya na ọzụzụ kwesịrị ekwesị nke dị ezigbo mkpa maka ihe ịga nke ọma ya. Ọganiihu ya adịghị elu ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume ịmata ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ahụ na-eji ya ma ọ bụ na-ahụ ya ka ọ bụ jịksik ma tụfuo ya tupu ịmalite ọrụ. Iji hụ na ejiri ya, a ga-enyerịrị onye ọrụ ọzụzụ ọzụzụ iji nyere ha aka ịmata etu ọ dịruru mkpa na ha na-eji ngwaọrụ nleba anya ọkachasị tupu ịmalite ọrụ. Thelọ ọrụ ahụ kwesịrị ịgbalịsi ike ịzụta ngwaọrụ dị fechaa na nke dị obere na “usoro 1, 2, 3” maka ojiji.
Usoro Buddy: enwere ike ijikọ ndị ọrụ iji hụ na nchekwa nke otu n'ime ha na-ejikwa aka nke ọzọ n'ihe banyere ihe ọghọm. Usoro a gụnyere itinye ndị ọrụ ọnụ ka ọ bụrụ na ha bụ “onye na - edebe nwanne” otu a ka nchekwa nke mmadụ si bụrụ ọrụ nke ibe ya. Ọ bụ usoro dị mma nke ukwuu dịka ọrụ ụfọdụ ebe ikuku redio na ebili mmiri EM agaghị anabata maka mkparịta ụka, sistemụ nnabata nwere ike ijide n'aka na ọ bụrụ na ọnọdụ mberede nwere enyemaka mbụ maka nke ọzọ.
Kpesa ihe merenụ dị ezigbo mkpa na sistemụ ụdị a
Otu onye ọrụ na-emeso nke ọzọ n'ọnọdụ ọ bụla nke ihe ọghọm
Ihe ọghọm nwere ike ịgụnye ma ndị ọrụ abụọ na-eme ka usoro ibe bụrụ ihe anaghị arụ ọrụ
Usoro enyi dị ka ihe ọ na-agaghị ada, ọ naghị echebara eziokwu ahụ anya na ihe ọghọm nwere ike ime ma tinye ndị ọrụ ahụ ka ọ bụrụ nke ga - eme ka ọ ghara ikwe omume inwe mkparịta ụka. Ohere nke usoro a ga - aga nke ọma bụ ọkara, n'ọtụtụ ọnọdụ, ihe nwere ike ịga nke ọma na-emetụta ndị ọrụ abụọ ahụ. Ọ ga-adị mma ijide n’aka na ndị ọrụ abụọ ahụ nwere akụrụngwa nwere ike izipu ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ma ọ bụrụ na ha abụọ daa n'otu oge. A na-ahọrọ usoro nke teknụzụ ugbu a karịa usoro ntuziaka dị ka usoro ndị enyi
Usoro nyocha ekwentị dabere: Nke a bụ usoro eji enye oge ọrụ nke onye ọrụ nwere ịkpọ na ịkọ banyere ọnọdụ ọrụ. Inwe oge ọkpụkpọ a na - eme mgbe niile na - enyere nzukọ aka ịmara ọrụ ha dị mma na ọrụ ahụ na - aga n'ihu. A na-eme ụdị oku a ka ọ bụrụ elekere kwa oge. Uzo uzo abuo eji eme ihe ndia.
Akpata ebe ana-akpo oku: nke a putara na inwere ike kpoo oku site na iji mkpoku oku
Igwe ojii na-arụ ọrụ na-akpaghị aka: nke a nwere ike iji sọftụwia dị ka ihe nlereanya ọrụ, nke a na-eji data site na otu sọftụ wee jikọta ndị otu maka nkwukọrịta n'ịntanetị.
Kwa oge elekere / izu abụọ, inwere ike ị nweta ọkwa sitere n'aka ndị ọrụ
Ọ na - adị mfe ịmata ma ihe adịghị mma
Viakpọ site na tariffs nwere ike ịdị oke ọnụ ma ọ bụrụ na enweghị ihe ha ga-akọ
Mgbe akpọkpọchara, ihe ọghọm nwere ike ịdapụta ma ọ bụrụ na mgbe ọ bụla oku mechara chọpụta na ọ ga - egbu oge inye aka.
Checkzọ nyocha ekwentị dabere na mmadụ chọrọ ahụike ka ọ were oge ya wee kpọọ ụzọ ndị a nwere ike isi bụrụkwa ntụkwasị obi dịka onye ọrụ nwere ike daa ala ma ghara ịnwụ. Iji mee ka ọnụego ya ga-aga n’ihu, enwere ike iji ya nwere ihe mmetụta na trackers na-eziga mkpu ma ọ bụrụ na ihe egwu. Ekwesiri iji ngwa ndị ọzọ jiri usoro a ọ bụghị ịdabere naanị
Ngwa nyocha ngwa ama: site na iji ama ama na teknụzụ ndị a ma ama na teknụzụ smartphone kachasị ọhụrụ, mmepe nke ngwa na-enyere ndị ọrụ aka ịrịọ maka enyemaka ugbu a. Site na mwepụta na taabụ nke bọtịnụ ụfọdụ, onye ọrụ ga-enweta enyemaka ịbịarute ngwa ngwa ọ bụla achọrọ ha site na iji teknụzụ GPS ngwa ndị a nwere ike iji maka nsuso. Ndị a ngwa nwere ike mgbe ụfọdụ nwere bọtịnụ ụjọ ma ọ bụ kwere ka nyocha ngwa ngwa na-enweghị chọrọ oku. Appsfọdụ ngwa ọdịnala na-enye ohere maka enweghị aka na - enweghị aka, nke a nwekwara ike ịdọrọ otu ntanetị na jaket ekweisi. Nke a bụ ụzọ ndị ọrụ owu na-enwe ike igosi ngwa ngwa maka enyemaka na-enweghị emeghe ekwentị ha.
Ọ dị mfe iji ma kọọ akụkọ
Site na iji ngwa, ị nwere ike inyocha ndị ọrụ gị ezigbo oge
Tọlite ​​chọrọ ọkachamara aka ọrụ aka imepụta
Ngwa ọdịnala na-abụkarị ọnụ iji melite ma wuo
Accesschọta ịntanetị, ọ nwere ike isi ike ịkọ ebe ọ nweghị ịntanetị.
Thesezọ ndị a chọrọ ezigbo njikọ tontanetị iji kparịta ụka mgbe niile ebe ọ bụ sistemụ arụmọrụ gburugburu teknụzụ ma na-akpaghị aka ọ bụ otu n'ime usoro ndị ịga nke ọma. Njikọ Internetntanetị nwere ike imetụta ọnụego ya na-aga nke ọma dịka ọchọrọ ịntanetị iji zipu akụkọ ma kpalite mkpu SOS. Smartphonezọ smartphone dị ezigbo mkpa ma dekọọ ọtụtụ mkpọtụ site na ahụmịhe onye ọrụ.
Musttinye usoro onye ọrụ ga-eche maka nchekwa nke ndị ọrụ ọkachasị, mana karia ịhọrọ usoro ọ ga - akachasị mma ịgụnye ma na-enyochakwa usoro mmeri nke usoro ndị a.
Nzuzo 2581 5 Echiche Taa
Etu esi atule Man Down System (A10004) nke oma